ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे टु यु प्रिय घडी - Ek Jamarko
Home / समाज / ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे टु यु प्रिय घडी
ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे टु यु प्रिय घडी
ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे टु यु प्रिय घडी । तिम्लाई प्रणय दिवसको उपलक्षमा धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु ।
तिमी संगको सहवासमा रमाएरै मेरा जिन्दगीका धेरै दिन हरुले ‘उर्वर समय’ को उपमा पाएकाछन । तिमीले हरेक दिन उहि समयमा ब्युझाईदिन्छेउ र त धेरै भोका पेट हरु भरेको छु मैले नत्र कसरी बन्द गराउदोहुँ सिंगै मेरो ‘उमेर’ खाएर पनि नअघाएका समयका मुखहरु । फेरीपनि बिहानै तिमीले मलाई उठाउन प्रयोग गर्ने आवाज कर्कश लाग्छ मलाई । रिस उठ्छ तिम्रो आवाज सुनेर तर मलाई थाह छ तिमी आवाजहिन भयौ कुनैदिन भने म निदाईरहनेछु । तिमि चुप भयौ यदि कुनै दिन भने दाउमा लाग्नेछ मेरो जागीर । मलाई समयमा उठाउने,समयमा सुताउने अनि मेरो पेटमा चारो आवस्यक परेको समेत मलाइ याद दिलाउने तिमि मेरी प्रिय एक मात्र त छौ मेरो एक मात्र सहारा ।
म पनि मान्छे त बैगुनी नै हुँ । कति ईमान्दार छौ तिमि, हरेक कुरा एक सेकेन्ड फरक नपारेर मेरो लागि कुदिरहन्छौ । कतै नौ, बाह्र या तिन, छ स्टेसन तिर तिमीलाई पनि थकाइ मार्ने रहर थियो होला । आफ्ना रहर हरु बिर्षिएर मेरो भलाइको निम्ति दौडीरहनु लाइ आफ्नो धर्म सम्झन्छौ तिमि । यहा सम्म कि मेरो ज्यानलाई पानी आवस्यक परेको, पिएको पानि र अन्नले बाटो खोजेको समेत याद दिलाईदिने जिम्मेवारी बहन गरेर पनि तिम्ले कहिल्यै जस पाईनौ ।मैले तिमीलाई तिम्रो कामको जस दिन जानिन कि तिमीले जस खोज्न जानिनौ ? घुर्क्याएर कुनै दिन तिमीले मलाइ नउठाईदिएको भए फकाउदोहुँ तिमीलाई मैले तर तिमीले घुर्क्याईनौ कहिल्यै न बदलामा केहि माग्यौ नै ।
केवल दुइ बर्षमा एकपटक फेर्नु पर्ने तिम्रो खान्की ‘ब्याट्री’ फेर्न पनि याद भएन मलाइ । तिमि मुर्झाउदै गएपछि र तिम्रा सुई हरुले गति घटाउदै लागेपछि मात्र म बुद्दुको दिमागमा तिम्रो खान्की को कुरा छिर्यो । त्यसबेला मा धरी तिमीलाई दोष लगाएँ “ओहो कस्तो महँगो ब्याट्री” मेरो मुख बाट निस्केको वाक्य यहि थियो । बिगत दुइ बर्ष तिमीले म प्रति लगाएको एक एक गुण को पाप लागे जस्तो अनुभव भईरहेको छ अहिले मलाइ । उमेरको उत्तरार्ध संगै अहिले आएर बल्ल तिम्रो महत्व बोध हुँदै गईरहेको छ । तिमी विनाको जिन्दगी म कसरी बाँच्दोहुँ सोचेर पनि विरक्त लाग्छ अचेल ।
मेरी प्रिय घडी..तिमी नै त छौ जसले मलाई निर्देशन दिईरहेछ र म आज्ञाकारी भएर खुरुखुरु तिम्रो सुईले तोकीदिएकै समयमा नित्यकर्म गरिरहेछु । रुटिनमा बाँधिएको छु । अनुसासनमा बसेको छु । तिम्रो आदेशमा सुत्न,उठ्न र सपना देख्न सिकेको छु बानी परेको छु ..! तिमी बाहेक को भयो र मलाई बाटो देखाउने ? मेरो जिन्दगी कै एक्ली साथी तिमी ...मेरी प्यारी घडी...तिम्लाई भ्यालेन्टाईन डे को धेरै धेरै शुभकामना ।।
ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे टु यु प्रिय घडी Reviewed by Durga Pangeni on फ़रवरी 10, 2018 Rating: 5